बोल्ने कला सिक्दै जनप्रतिनिधि र महिला कर्मचारी - Rajmarg Online
बोल्ने कला सिक्दै जनप्रतिनिधि र महिला कर्मचारी
दंगीशरण, २९ पौष । दंगीशरण गाउँपालिका वडा न. १ कि जानकी चौधरी श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहन गरिन । कार्यक्रम समापन गर्नका लागि रोष्टममा उभिएर बोलीन सुरुमा बोल्छु भनेर उभिइकि जानकी बिच भागमा आईपुग्दा के भनम् भन्ने भयो अल्मीलीईन । सम्झीदै फेरी पनि कार्यक्रमको समापन गरिन । “जनप्रतिनिधि भएर पनि कार्यकाल सकिनै लाग्दा सम्म बोल्ने कलाको विकास भएन । आफै पछि परेर हो या अवसर नपाएर हो ।” उनले अनुभव सुनाईन् । वडा न. कि वडा सदस्य सुभद्री थरुनीको अनुभव पनि उस्तै थियो ।
नेपाल पार्टिको आम सभाको विशीष्ट अतीथि बनेकी कार्यपालिका सदस्य सुभद्रि थरुनी म बोल्छु भनेर अगाडि आत्मबल बढाएर जादा समेत रोष्टम सम्म पुग्दा सबै हराउँने गरेको सुनाईन । शिक्षाप्रोढ कक्षा छ तर जनप्रतिनिधि बनीन् । “कार्यकाल सकिनै लाग्यो । रोष्टममा गएर बोल्ने बानीको विकास भएन । अघिपछि छलफल,बैठकमा राम्रो बोलेको जस्तो लाग्छ तर ठुलो जनमानसमा भन्छु भनेको कुरा पनि बिर्सीन्छ । आज पनि त्यस्तै भयो ।” उनले अनुभव सुनाईन् ।
वडा न. १ कि वडा सदस्य अमृतावि.क को अनुभवपनि उस्तै छ । “के बोल्ने भन्ने समस्याले सताउँदो रहेछ । अभ्यास नभईकुनै कुरामा सफल नभइदो रहेछ । कुर्सीमा बसेर जती कुरा राख्न सकेपनि अगाडि गएर बोल्दाको अनुभव नै फरक हुदोरहेछ । बोल्ने अभ्यासका बारेमा पढ्दा बुझ्दा आँट आएपनि अगाडिको रोष्टमले सबै खायो ।”उनले अनुभव सुनाईन् ।
वडा न. ५ कि वडा सदस्य निमा चौधरी भन्छिन“बोल्छु भनेर अगाडि जादा सबै बिर्सीय । तर चार दिनको तालीम बाट अझै बोल्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको अनुभव भएको छ ।”दुई वर्ष अघि पनि यहि तालीम लिएकाले यो वर्षको उद्घोषण तालीम बाट थप आत्मबल बढेको अनुभव सुनाईन् ।
वडा न. ३ कि वडा सचिव सिता रेग्मी वडाको कार्यक्रम चलाउँदै आएपनि धेरै कुराको ज्ञान भएको अनुभव सुनाईन् । मञ्चमा गएर के बोल्ने, कसरी बोल्ने , कस्तो कुरालाई ख्याल गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान भएको छ । उनले भनीन् ।
सविता थानी रोष्टममा गएर बोल्नै नजानेपनि कसरी बोल्ने , कती समय बोल्ने भन्ने कुराको ज्ञान भएको बताईन् ।
शिक्षा शाखाकि उमा के.सी अभ्यासका क्रममा कार्यक्रम राम्रो तरीकाले प्रश्तुत गरिन् । तर आत्मविश्वास बढाएपछि सबै कुरा मिल्दै जाने कुराको अनुभव भएको सुनाईन् ।
यस्तै योजना शाखाकि नमुना खड्का उद्घोषणका विषयमा अध्ययन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताईन् ।“ जती अभ्यास गर्यो उती बोल्ने कलाको विकास हुँदो रहेछ ।” उनले अनुभव सुनाईन् ।
उद्घोषण तालीम अध्यासका क्रममा पवित्रा के.सी आम सभाको सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिन् । “अगाडि सहभागिता देख्दा बोल्ने कुरा नै विर्सीय । क्षमता अभिबृद्धि भएको महशुस गरेपनि आतमवल बढाउँन गाह्रो भयो । तालीम बाट अनुभव र सिपसिके यसमै खुसी छु ।”उनको अनुभव थियो ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले महिला कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुका लागि आयोजना गरेको चारदिने उद्घोषण तालीमको तेस्रो दिनमा सहभागि महिला जनप्रतिनिधि र महिला कर्मचारीहरुले तालीम पछि यस्तो अनुभव सुनाए । महिलाहरुमा बोल्न सक्ने कलाको विकास होस् भन्ने उद्धेश्यले गाउँपालिकाले तालीमको आयोजना गरीएको तालिमपछि “म बोल्न सक्छु ” भन्ने हिम्मत र आँट पलाएको सहभागिहरुको भनाई थियो ।
तालीमको दुइ दिन उघ्घोषण गर्ने शैली, बोल्ने शैलीबारे प्रशिक्षण दिएका युगवोध राष्ट्रिय दैनीकका जेएन सागरले तालीमको तेस्रो दिन उद्घोषण गर्ने कलाको विषयमा अभ्यास गराए । अभ्यासका क्रममा धेरै कुराको अनुभव भएको भन्दै सहभागिहरुले यस्ता तालीमको आवशयक रहेको बताए ।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका उपाध्यक्ष सन्तोष सुवेदिले नेता र नेतृत्व, नेताले के गर्छ, संचार भनेको के हो, संचारका प्रक्रिया विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
यस्तै तालीममा महिला मानव अधिकारकर्मी शुष्मा लामिछाने गिरीले विवादको परिभाषा, यसका सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, विवादका कारण, चरण, संवाद के हो ? यसको उद्धेश्य लगाएतका विषयमा प्रशिक्षण दिनु भएको थियो । तालीममा ३० जना महिला कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बोल्न सक्ने क्षमताको विकाश गरौँः उपाध्यक्ष खड्का
दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमाकुमारी वली खड्काले हरेक मानीसमा बोल्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न जरुरी रहेको बताईन् । “बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन ”भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै बोल्न सक्ने कलाको बिकास गर्न आवश्यक रहेको बताईन् । “हामी सबै काँहा,कसरी बोल्ने भन्ने बिषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको नवोलेरै कार्यकाल जान लागेको छ त्यसैले हरेक महिलाहरुमा बोल्ने बानीको विकास हुनुपर्छ । बोल्न नजानेकै कारण पछाडि परिएको हुनाले अव आफनो क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्छ ।” उपाध्यक्ष खड्काले भनिन् । चार दिने उद्घोषण तालीमा समापन कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खड्काले यस्तो बताएकि हुन् ।सिक्ने र सिकाउँने कुराको सधै चलीरहने प्रक्रिया भएकाले यसलाई सबैले मनन् गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
समापन कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खिमबहादुर खड्काले तालीम लिने मात्र नभई ब्यवहारमा लागु गर्न जरुरी रहेको बताए । उद्घोषण भनेकै बोल्न सीक्ने शैलीहो भन्दै लिएको ज्ञान र सिपलाई लागु गरे मात्र तालीमले सार्थकता पाउँने बताए ।
सो अवसरमा योजना शाखाप्रमुख लेखनाथ आचार्यले यो तालीमले धेरै कुराको ज्ञान बढाएको भन्दै दंगीशरणमा क्षमता विकासका तालीम संचालनगर्न जरुरी रहेको बताए । जो सुकैमा कुनै ठाउँमा बोल्दा मनमा डर, त्रास पैदा हुने भएकाले हरेक मानीसलाइ क्षमता विकास तालीम आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य हिरा चौधरीले तालीमले आत्मवल बढाउँने, क्षमता अभिबृद्धि गर्नमा टेवा पुगेको भन्दै यस्ता प्रकारका तालीमहरु ऋागामि दिनमा प्राथमिक्तामा राख्नुपर्ने बताईन् ।
यस्तै कार्यपालिका सदस्य दिलकुमारी वि.क.ले सम्बोधन गर्ने तरीका, विषय-वस्तुमा कसरी केन्द्रीत हुने , स्पष्ट कसरी बोल्ने, आत्मबिश्वास कसरी बढाउँने, कस्तो खालको कार्यक्रममा के बोल्ने, बोल्दा ध्यानदिनु पर्ने कुराहरु सिक्ने मौका पाएकाले अगाडि बढ्न अझै प्रेरीत गरेको बताईन् ।
तालीम समापनका क्रममा सहभागिहरुलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमाकुमारी वली खड्काको अध्यक्षता तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खिमबहादुर खड्को प्रमुख आतीथ्यतामा तालीम सम्पन्न भएको थियो ।महिलाबालबालीका शाखाकि चन्द्रावलीले धन्यवाद ज्ञापन गरेकि थिईन भने तालीमको सहजीकरण सहभागिको तर्फ बाट कृषि शाखाकि योगमाया कँवरले गरेकि थिईन् ।
Prevबम्नैमा घरघरमा खानेपानी
Nextजब दाजुबहिनी बीचमै सेक्स हुन्छ…